Munamato wehukama hweputsa | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Kunamatira kwehukama hwakatsemuka
Kunamatira kwehukama hwakatsemuka
Chirevo 27: 6: Kutendeka maronda eshamwari; Asi kutsvoda komuvengi kunyengedza.
Unonzwa sei kana moyo wako uchinge uchityiswa newaunoda kwazvo? kunyanya kana pfungwa dzako dzese dzakatotarisana nekuroora uye nekukurumidza, munhu akabuda muhupenyu hwako pasina kutaura zvakanaka. Iwe unonzwa kufara nezvazvo here? Hunhu hwemurume hunoratidzwa nekusaziva zvakawanda ndosaka murume asingafungire.
Kuti mumwe munhu waunogovana naye moyo wako, mumwe munhu waunofira anongomuka mamwe mangwanani osarudza kufamba achienda achikusiya uchirwadziwa. Iko hakuna mushonga kana mushonga unorapa marwadzo iwayo kubva mukuenda chete nyasha dzaMwari dzinogona. Nhasi tichave tichitarisa kumunamato wehukama hwakaputsika. Varume nevakadzi vazhinji vakawira mukuora mwoyo nekuda kwekusuwa kwemoyo, kune vamwe vanhu vakavaka hunhu hwakatsauka nekuda kwekuti mumwe munhu wavakavimba naye akaputsa moyo yavo.
Panoitika kusuwa kwemoyo, nzanga inotarisira kuti mapato maviri aya anofanira kuenderera nehupenyu. Nguva zhinji, manzwiro euyo ane moyo wakaputsika haagarotorwa mukufungwa. Zvichakadaro, kune vanhu vazhinji kwazvo vakasiya rudo, nekudaro, vakapika kusazomboroora nekuti havadi kusangana neruzivo rwakadai futi.
Rumwe rutivi rwe nyaya nd rwekuti chero paine hukama hwakatyoka, pane dzimwe nguva Mwari anoda kuti tidzidze chidzidzo kana Iye aine hurongwa hwakanaka. Semuenzaniso, kana vaviri vacho vasingazove nemuchato unofadza kunyangwe mushure mekupa zano uye neminamato yekureverera, Mwari vanogona kutendera kusawirirana pakati pavo izvo zvichaponesa duo kubva mukumirira kutongwa kuri kuuya mune ramangwana. Nekudaro, hazvisi zvese zvakaputsika hukama hwakaipa zvachose, kana murume chete anogona kuona ramangwana.
Imi mese munofanirwa kuziva kuti tarisiro dzakakwirira dzinotangira kuodzwa mwoyo. Kana tarisiro yemurume yakakwira pane chimwe chinhu, kushungurudzika hakusi kure. Hunhu hwemurume hwakadai kuti huchagara uchimuita misbeha uye kuodza moyo kunyange izvo izvo zvaanga asina kuitirwa kutiodza moyo. Semuenzaniso, bhuku raGenesi rakanyora kuti Mwari akatendeuka mumoyo make kuti akasika munhu nekuda kwemabasa emaoko edu. Kana murume achikwanisa kukonzera kushungurudzika kuna Mwari Wemasimbaose, ndoda murume kuhukama nemurume?
Zvakadaro, Mwari vane nzira yekurapa yakadzika kwazvo maronda ese kana isu chete tichizomupa iye asingaverengeki mukana wekushanda patiri. Kune vanhu vazhinji vanotambura kurwara kwemoyo nekuda kwehukama hwakatyoka, iyi ndiyo minamato yekukubatsira iwe kukurira kunzwa kwekushungurudzika kwemoyo.
3 Nzira dzekuti udzivise Hwakakanganisika Hukama
1. Bvunza Mwari Kuti Vatungamire: Tisati tapinda muhukama, zvakakosha kuti titsvage chiso cha Mwari tisati tapinda muhukama hwakakomba. Kunyangwe iri hukama hwerudo kana hukama hwebhizimusi. Kana isu tikatsvaga chiso chake, Iye anoponesa kumeso kwedu kubva pakunyara nekupwanya moyo. MaKristu mazhinji arikutambura nehukama hwakatyoka nhasi nekuti havana kutsvaga kuziva kuda kwaMwari maererano nehukama uhu. Hazvisi zvese izvo glitters igoridhe, kunyangwe dhiabhori anogona kuoneka semutumwa wechiedza, ndosaka tichifanira kutarisa uye kunyengetera tisati tapinda chero hukama.
2. Namatira Chipo Chekunzwisisa: Chipo chekunzwisisa ndechimwe chezvipo zveMweya. Zvipo izvi zvinoita kuti ugone kunhuwa zvakaipa kubva kure. Kana ichi chipo chiri kushanda muhupenyu hwako, iwe unozoona munhu asiri iwo kana vauya muhupenyu hwako. Muna Mabasa 16, Pauro aiziva kuti musikana wechidiki aiporofita kumashure kwavo aive nemweya wekuuka, saka haana kunyengerwa. Zvakare Jesu Kristu aiziva kuti vaFarise pavaive vakaipa, vamwewo pavaivaona sevanoswededza Mwari, Jesu aiziva kuti vaive ani chaizvo nekuti aikwanisa kuvaziva kubva kuMweya wake. Paunotsungirirwa neMweya uyu, iwe unozoziva paunoona munhu chaiye. Ndinokukurudzira kuti unamate kuti upiwe chipo ichi.
3. Iva Akatendeka: Usangotarisa mukadzi akatendeka, uve mubatiri akatendeka. Iva nechido chekupa icho chaunoda kuwana. Nzira yakanaka yekushandura nyika ndeyekuchinja iwe pachako kutanga. Kana uchida rudo rusina magomendi, ipa rudo rusina magumo, kana uchida ruremekedzo ipa ruremekedzo, Kana iwe uchida zvakapetwa, unofanirwa kuzviita wakakodzera kunakirwa.
• Ishe Jesu, ndauya pamberi penyu nomoyo wakaputsika, moyo wangu wakarodzwa neuyo wandakanga ndaronga kuzotora hupenyu hwangu hwese. Ndanamata nekufamba kwenguva nezvazvo, ndakaenda kunopa dzakasiyana siyana zvemweya asi zvakadaro, rimwe zuva mumwe wangu akafunga kufamba achienda achindisiya ndakarwadziwa moyo, Ishe Jesu, ndoziva une kubata kwekupora kune maronda ese ndapota gadzirisa moyo wangu wakaputsika .
• Ishe Mwari, nguva zhinji ini ndichashamisika kuti nei izvi zvichifanira kuitika kwandiri, ndakafunga isu zvakanaka pamwe, ndakafunga rudo rwangu rwakakwana kuti tirambe tichienda, asi ndakakanganisa sei nguva yose iyi. Jesu, ndinokumbira kuti undipewo nyasha kuti ndifambe neupenyu. Ipa simba uye simba rekufambira mberi, ipa Nyasha dzekuti uchiri kuda Mwari uye usamborega pane zvese zvaakavimbisa kwandiri.
• Ini ndinokumbira kuna Mwari kuti mundipewo Nyasha yekugamuchira nekuzvininipisa mamiriro andisingakwanise kushandura, hukama uhwu hwakatyoka hwagadzira ronda rakakura mumoyo mangu uye pese pandinoyeuka chinoitika ichi, ropa nyowani rakabuda mubanga rangu. ndipeiwo nyasha dzekutarisa kupfuura vanga rangu muzita raJesu.
• Ishe Mwari, ndimi rubatsiro rwangu rwepano munguva yekushaiwa, handidi kuzadzwa nekutambudzika nekurwadziwa kwehukama uhu hwatsemuka. Ini handidi kutora sarudzo isina musoro nekuti munhu atyora moyo wangu. Ishe Jesu, ini ndinokumbira kuti muve musimba rangu pamusoro pekurwadziwa nekushungurudzika kwakakonzerwa netsaona yake isingafadzi.
• Ishe Mwari, ndinokumbira kuti munzwe moyo wangu nerudo rwenyu uye muite kuti ndikanganwe zvakapfuura. Nekuti chero nguva yandinorangarira, ndinonzwa kurwadziwa mukati mangu, Ishe Jesu, ndibatsirei kuti ndisazofunga nezvazvo zvakare. Chave chinhu chekare, ndokumbirawo mundibatsire kuti zvisazokanganisa hupenyu hwangu hwazvino kana kuparadza ramangwana rangu.
• Ishe Jesu, zvakanyanya kupfuura nakare kose ini ndinoda mweya wako, mweya wako unozondiswededza padyo newe, mweya wako wekushamwaridzana kukuru, iwo mweya unozonditungamira uye wonditungamira. Musanditendera kuwira mumaoko asiri iwo zvekare, ndinokumbira kuti chero pamusuwo wemoyo wangu uchavhurika kuti mudanane zvakare, ndapota, Ishe Jesu, ngaruve kune munhu chaiye.
• Ishe Jesu, Ndinoziva iyi chikamu chehupenyu hucharamba hwapera munguva pfupi. Ishe ndinoda muchengeti wako, ini handirwadze izvi kutapira mune rangu ramangwana. Usandirega ndichiita danho rinozoita kuti usaore mwoyo mukati mangu. Ndibatsireiwo ishe kuti hukama hwangu hwakatyoka hauparadze hukama hwangu nemi uye zvinopesana, ndipeiwo nyasha dzekuenderera mberi ndichive mwana wenyu.
• Ishe, ini ndinonamatira vanhu vazhinji vakabayiwa nedambudziko rakafanana nerangu, ndinokumbira kuti muvasimbise, muvape kuti vagamuchire izvo zvavasingakwanise kushandura uye kuenderera mberi nehupenyu. Vaswededze pedyo uye pedyo newe, kuti dhiabhori haazotora mukana pakutambudzika kwavo zvazviri kuwana mweya yavo. Ita kuti vaone shamwari mauri, uvape nyasha kuti vakwanise kukuudza uye kuvimba newe. Vaitei vaone mangwana iri nani zvichavabatsira kukanganwa zvakapfuura vofambira mberi nehupenyu.
Previous nyayaPfungwa dzeMunamato Kuparadza zviitwa zvemuvengi
inotevera20 minamato Pfungwa dzeMukati Runyararo Mukuvhiringidzika
Esther Kurume 26, 2020 At 11:29 pm
Izvi zvakanyatsondibatsira kuti ndisatombogadzikana pamberi paMwari uye nekumutendera kuti agadzirise uye kurapa kushungurudzika kwemoyo wanga uchindibata uye uchindirwadza kwemwedzi gumi nemasere.
Ndokutenda zvikuru! Mwari varopafadze shumiro yako
Kunamata Kunongedzera Kupokana Nenjodzi Dzinongoitika